दैलेखमा कहाँ कहाँ लागू भयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ? – Online Jagaran
दैलेखमा कहाँ कहाँ लागू भयो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ?
५ असार २०७६, बिहीबार ०८:४० June 20, 2019 जागरण
दैलेख, ५ असार (जागरण) । दैलेखका तीनवटा स्थानिय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेका छन् ।
चारवटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका गरी दैलेखका ११ वटा स्थानिय तहहरुमध्ये पाँच वटा स्थानिय तहले केही दिनमै कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेका छन् ।
नारायण नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका र नौमुले गाउँपालिकाले कार्यक्रम लागू गरेका छन् । गुराँस गाउँपालिकाले भने अर्को शीर्षकको कार्यक्रममार्फत् युवाको कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ । अव त्यसलाई नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिणत गर्ने छलफल भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताउनुभयो ।
चामुण्डा विन्द्रसैनी र आठबीस नगरपालिका तथा डुङ्गेश्वर, भगवतीमाई र महावु गाउँपालिकाले भने अबको केहि दिनमै कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको जनाएका छन् ।
उनीहरुले तथ्याङ्क संकलन गरिसकेकाले काम अघि बढाउन केही समय मात्र लाग्ने जनाएका छन् । स्थानिय तहहरुले सडक खन्ने, सडक नाली बनाउने तथा सिञ्चाई कुलो बनाउने जस्ता कार्यमा परिचालन गरिएका छन् ।
अरु स्थानीय तहहरु भने कस्तो काममा कस्ता व्यक्तिलाई परिचालन गर्ने ? भन्ने विषयमा अन्योलमा परेको कारणले कार्यक्रममा ढिलाई भएको हो । केही स्थानीयतहहरु अझै तथ्याङ्क संकलनमै अल्झिएका छन् ।
दुल्लु नगरपालिका र ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले भने तथ्याङ्क संकलनको काम नै अघि बढाउन सकेका छैनन् । ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले दिएको जानकारीअनुसार भर्खर मात्र संघ सरकारको चिठ्ठी वडा कार्यालयसम्म पुगेको छ ।
दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये गुराँस र डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा ३०÷३० लाख, ठाटीकाँध र भगवतीमाई गाउँपालिकामा ३२÷३२ लाख, महावु गाउँपालिकामा ३३ लाख, नौमुले गाउँपालिकामा ३४ लाख र भैरवी गाउँपालिकामा ३५ लाख बजेट संघ सरकारले पठाएको छ ।
यस्तै आठबीस नगरपालिकामा ४३ लाख, दुल्लु नगरपालिकामा ५८ लाख, नारायण नगरपालिकामा ४५ लाख र चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा ३९ लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।
कर्णाली रैबार २०७६/०३/०४(साँझ)
१५ असार २०७६, आईतवार ०७:४९ June 30, 2019 जागरण
कर्णालीमा वार्षिक ६ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने
१२ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०२:०५ September 28, 2018 जागरण